ဂူဗိမာန်တော်အတွင်းရှင်လျှက်စံပယ်တော်မူနေသော ဟယာတောတ်နဗီမိုဟမ္မဒ်စွလ္လာလ္လဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ် | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← Aqida Ahle Sunnaut Waljamaat
Sal-le alar Moham-madin (ပြုံးပြုံးလေး နှင့်ဂျန္နတ်သွားမယ်) →
( ဤကျမ်းစာရေးရခြင်းက အာကီဒါပိုင်းဆိုင်၍ လည်းကောင်း၊ စာဖတ်ပရိသတ်များကတောင်းဆို၍ လည်းကောင်း၊အမှန်
တကယ်သိသင့်ထိုက်သော အကြောင်းအရာဖြစ်နေ၍် လည်းကောင်းအမှန်တရားရှာဖွေသိရှိလို၍လည်းကောင်းရေးသားခြင်းဖြစ်
ပါသည်။ဤကျမ်းမူရင်းစာအအုပ် (နစိမ်မစ္စဘာ) ကျမ်းစာအုပ်ငယ်မှကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကျမ်းစာအုပ်ကို မော်လဝီ မိုဟာမ္မဒ်အလီယူစွတ်ဖ် မောင်ဝင်းမြင့်(မန္တလေး)ကပြုစုပြီး၊မော်လနာစိုင်ယဒ်ဇဖွရ်အာလီရှားဆပ် က revise လုပ်သည်။ဤကိုးကားကျမ်း
အချို့ ကိုစာပိုဒ်၏ ဘေးတွင်ဖေါ်ပြထားသော်လည်းကိုးကားကျမ်းများလွန်းသည့်အတွက် အချို့ကိုအောက်တွင်သီးခြားဖေါ်ပြပေးပါသည်။)
ဤစာကိုရေးသားရာတွင်စုစည်းဖေါ်ပြထားသော၎င်း စာအုပ်မှကျွန်တော်တင်ပြ လိုသောအချက်အချို့ကိုသာကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်
ပါသည်။အချို့သော အချက်အလက်များ ၊အကြောင်းအရာထပ်နေသောအချက်များ၊အငြင်းပွားသောအချက်များကို ကိုချန်ထားခဲ့ပါ သည်။
ယာ ရဘ္ဘိစွလ်လေ ၊ဝစွလ်လိမ် ၊ဒါအေမာန်အာဗဒါ၊
အာလာဟာဗီဘေက ၊ခိုင်ရ်ရေ ခွလ်ကေ ၊ကွလ်လေဟိမ်။
တမန်တော်မြတ်စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိ စ္စလာမ် ၀ဖါတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်လည်းမိမိ၏ဂူဗိမာန်(ရောင်ဇွာပါက်)တော် ၌ရှင်နေသည်
ဆိုသောအချက်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အဟ်လေစွန္နတ် ၀လ်ဂျမာအတ်အာကီဒါဝင်များ တစ်ညီတစ်ညွတ်သောယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
အဟ်လေစွန္နတ်အာကီဒါအရ တမန်တော်မြတ်ကြီးသာမက အခြားသော နဗီတမန်တော်များအားလုံးပင် မိမိတို့၏ ရောင်ဇွာ
ဂူဗိမာန်တော်အတွင်း အသက်ရှင်လျှက်ရှိနေတော်မူကြောင်း ကို လက်ခံယုံကြည်ကြပေသည်။
(ရှိခ်အဗ္ဗဒွလ်ဟောက် မိုဟဒ္ဒစ် ဒေ့ဟ်လ၀ီ သခင်၏ မဒါရေဂျွန်နဗူဝတ်ကျမ်းတော်)
အထက်ပါနဗီတမန်တော်သည် မိမိတို့ဂူဗိမာန်တော်၌ ရှင်နေရုံသာမက အစ္စလာမ်သာသန အဇာနည် ရှဟီဒီများကလည်းမိမိတို့
ဂူဗိမာန်တော် ၌ရှင်နေသည့်အပြင် ရိုဇီရိက္ခာများလည်း ရရှိကြောင်းကျမ်းမြတ်ကွရ်အာန် ၌အထောက်အထားများအရခိုင် လုံနေပါ သည်။
ထို့ပြင်တ၀ (အို-မုအ်မင်န် အပေါင်းတို့) အသင် တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လမ်းတော်၌ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရ သူတို့ကို သူသေ
များဟူ၍ မပြောဆိုကြကုန်လင့်။ (ယင်းသူတို့ သည် သူသေများ) အလျင်းမဟုတ်။ စင်စစ်မှာမူ ထိုသူတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အထံတော်၌ အသက်ရှင်လျက်ပင် ရှိကြလေသည်။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် (ထိုအကြောင်းကို) တွေးဆဆင်ခြင် မသိမမြင်နိုင်ကြချေ။
(၂း၁၅၄)
၎င်းပြင် (အို-နဗီတမန်တော်) အသင်သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားလမ်းတော်၌ (စစ်တိုက်စဉ်)အသတ်ခံရသော သူတို့ကို သူသေများဟူ၍ အလျင်း မထင်မှတ်ပါလေနှင့်။ (ထိုသူတို့ကား သူသေများ) အလျင်းမဟုတ်၊ စင်စစ်မှာမူကား ထိုသူများသည် ၎င်း
တို့၏ အရှင်မြတ်အထံတော်ဝယ်အသက်ရှင်နေသော သူများပင်ဖြစ်ကြသည့်ပြင် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏) ကျွေးမွေးတော်မူခြင်းကို
လည်း ခံကြရကုန်၏။ (၃း၁၆၉)
ုအားသေဆုံးသည်ဟုမပြောဆိုကြရန်၊မထင်မှတ်ကြရန် ကျမ်းမြတ်ကွရ်အန်က တားမြစ်ထားသည်။
ထိုကြောင့်နဗီတမန်တော်များသည် မိမိတို့ဂူဗိမာန်တော်အတွင်းဘရ်ဇခ်သက်တမ်းဖြင့် ရှင်နေခြင်းသည် အထက်ပါရှဟီဒီများ ရှင်နေခြင်းထက်ပို၍အားကောင်းနေပါသည်။အထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ် ဂူဗိမာန်၌ရှင်နေခြင်း
…….စင်စစ်သော်ကား အသင်တို့၌အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်မြတ်အား စိတ်ဒုက္ခပေး ပိုင်ခွင့်မရှိချေ၊ ထိုအပြင်နဗီတမန်တော်မြတ် မရှိသည့်နောက်တွင် ထိုနဗီ တမန်တော်မြတ်၏ ကြင်ယာတော်များနှင့်မည်သည့်အခါမျှ(အမြဲတမ်း)
ဘိမ်းမြားလက်ထပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလည်းမရှိပေ။ဧကန်မလွှဲ ဤသည်အလွန်ကြီးလေးသောအပြစ်ဖြစ်တော်မူသည်။(၃၃း၅၃)
ဤကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အဟ်လေ့စွန္နတ်ဝလ်ဂျမာအတ် အာကီဒါ ကျမ်းကြီး၊ကျမ်းငယ်အစောင်စောင်တို့တွင်လေ့လာ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဟဇရတ်ရှေခွလ်အစ္စလာမ် မော်လနာဟူစိုင်န် အဟာမဒ် မဒနီသခင်ကမိမိ၏ (မက္တူဘာတေရှေခွလ်အစ္စလာမ် အတွဲ- ၁ ၊
စာမျက်နှာ – ၁၃၁) တွင်ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ” မဒီနာမြို့တော်ရောင်ဝ်ဇွာဂူဗိမာန်တော်တော် သို့အရောက် ခစား၍ဇေယာရတ်ပြု ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင်ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်၏ ၀စီလာဖြင့်အလ္လာအရှင်မြတ်ထံဆုဒူအာတောင်းဆိုရန်လိုအပ်လှပေသည်။ ”
ထိုကြောင့်ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်နေသည်အတွက်ကြောင့်၊ ကိုယ်တော်မြတ်၏ ၀စီလာဖြင့်ဆုဒူအာတောင်းဆိုရန်လိုအပ်
……….စင်စစ်သော်ကား (အို-နဗီတမန်တော်) ငါအရှင်မြတ်သည် အသင့်အား ကမ္ဘာခပ်သိမ်းတို့အဖို့ကရုဏာတော် အဖြစ်နှင့် သာလျှင်စေလွှတ်တော်မူခဲ့ပေသည်။ (၂၁း၁၀၇ )
ကိုယ်တော်မြတ်သည် ရုပ်ခန္ဓာနှင့်တကွ ၀ိဥာဉ်ပါ ရောင်ဝ်ဇွာဂူဗိမာန်တော်အတွင်းတည်ရှိနေသော်ငြားလည်း ကိုယ်တော်၏
၀ိဥာဉ်သည် အလ္လာအရှင်မြတ်၏ အရ်ရှမိုအလ္လာနှင့်ဆက်သွယ်လျှက်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်လည်း ကိုယ်တော်၏ဖိုင်ဇ်ရဟာမတ်
အဘယ်ကြောင်းဆိုသော် အလ္လာအရှင်မြတ်က တမန်တော်မြတ်အား စင်္ကြ၀ဠာအပေါင်း၏ရဟမတ် ကရုဏာအဖြစ်နှင့်ပင်
ဥပမာဆိုရသော် အလ္လာအရှင်မြတ်က ဖန်ဆင်းထားသော နေ သည်မိမိတည်နေရာမှမိုင်ပေါင်းများစွာကွာဝေးသည်။ထိုနေ၏
အလင်းရောင်နှင့်အပူရှိန်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရရှိသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။တမန်တော်မြတ်၏(နုရီ)ရောင်ခြည်တော်နှင့်ဝိဥာဉ်တော်အားဖြင့်
ကမ္ဘာအနှံ့ (ဘရ်ကတ်၊ရဟာမတ်)ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အေးချမ်းသာယာမှုများကိုရရှိနေပေမည်မှာ ဧကန်မလွှဲပင်ဖြစ်သည်။
(အလ္လာဟ်မဟ် ဖွစ်ဇ် အ စ္ဘနေ့ ကိုင်ယုမ်၏ ဇာဒွလ်မအဒ်၊အတွဲ (၁)၊စာ -၃၀၄)မော်လနာ အအ်ဇဇ်အာလီသခင်သည် ဒေယိုဘန်ကျောင်းမှ စွယ်စုံတတ်အာလင်မ်ပညာရှင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးကျမ်းပေါင်းမြောက် များ
စွာပြုစုခဲ့ သူလည်းဖြစ်သည်။၎င်း၏အဆိုမှာ-ကိုယ်တော်မြတ်ဝဖါတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ရောင်ဝ်ဇာ ဂူဗိမာန်တော်အတွင်းရှင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်အခန်းထဲ၌လင်းမြဲ လင်းလျှက်ရှိနေသည်။ ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ် ဂူဗိတော်အတွင်းရှင်နေခြင်းသည်ထိုိ
ထက်ပင်ပိုနေသည်။ု (မော်လနာ အအ်ဇဇ်အာလီပြုစုသော နူရုလ်အီဇာ-ဟာရှေဘိလ်အဇ်ဘာဟ် စာ-၁၈၉ ၊ဟာရှေအမှတ်-၆)
ဟဒီးစ်ပညာရှင် ဟဇရတ်အဗ္ဗဒွလ်အာဇိဇ်(တာဗေအင်န်)သခင်၏အဆိုမှာ–အာယာမေ့ဟာရတ်(ယဇိဒ်စစ်တပ် မဒီနာမြိုကို
၀ိုင်းရံထားသောကာလ) မစဂျီဒေနဗူဝီ တွင် ၃-ရက်အာဇာန်၊စလာတ်ဝပ်မ ပြုနိုင်ခဲ့ပေ။ ထိုအခြေအနေရက်များ၌ ဟဇရတ်စာအဒ် ဘင် စိုင်ယဒ်သခင်သည်ပလီအတွင်း၌ပုန်အောင်းနေခဲ့ရာ နမာဇ်အချိန်ရောက်တိုင်း ဂူဗိမာန်အတွင်းမှ အာဇန်အေကာမတ် အသံများ ကြားခဲ့
သည်ဟု ဆိုသည်။ (မစ်ရ်ှကာတ်ကျမ်း၊ဒါရှိမီကျမ်း၊မဇွာဟေရ်ဟောက် တွဲ-၇ ၊စာ-၁၈၅)
နဗီတမန်တော်များသည်မိမိတို့၏ကဘရ်အတွင်း၌ ရှင်လျှက်ရှိတော်မူကြောင်း ဟာဒီးစ်တော်များ၌အခိုင်အမာတည်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ရစာအေလေအစ်ဘ်နို့အဘေးဒိန် အတွဲ – ၂ ၊စာ – ၂၀၃ )
ဟဇရတ်မိုလာအာလီ သခင်က တမန်မြတ်ဝဖါတ်ဖြစ်ပြီးနောက် တမနတော်မြတ်အား ဂိုစွလ် ရေချိုးသပ္ပါယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ
လူ့သဘဝအရ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲတတ်သောနိမိတ်လက္ခဏာများကို တမန်မြတ်၏ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်`၌တစ်စုံတစ်ရာ
အပြောင်းအလဲလုံ့ဝမတွေ့ရှိခဲ့ပေ။——-ထိုကြောင်းမိုလာအာလီသခင်က ဆက်လက်၍အမိန့်ရှိသည် မှာ-
အို-ကိုယ်တော်။ကိုယ်တော်မြတ်အပေါ်၌ ကွန်ုပ်၏မိဘ နှစ်ပါးစွန့်ပါ၏တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏မိဘတို့ထက် သာ၍ချစ်ရပါသော
ကိုယ်တော်ဧကန်မုချ ကိုယ်တော်သည် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ရော၊ ဝဖါတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပါ အလွန်သန့်ပြန့်စင်ကြယ်သပ္ပါယ်လျှက်
အန်ဘီယာ(နဗီတမန်တော်များ)သည် မိမိတို့၏ ကဘရ်ရိုဇာ(ဂူဗိမာန်)တော်`၌ ရှင်လက်ရှိပြီး စွလာတ်ဝပ်ပြုနေကြသည်။(မွစ်နဒေ့ အဘူယုအ်လာကျမ်း)။မဒါရေဂျွန် နိုဘူဝပ်-အတွဲ(၂)၊စာ-၄၄၇။ဂျဇ်ဘုလ်ကူလွဘ် ၊စာ-၁၈၀ ၊မွလ္လာအာလီကာရီ မရ်ကတ် ဒုတိယတွဲ၊စ-၂၁၂)
ထို့ကြောင်းရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်သည်မေအ်ရာဂ်ျည ၌တမန်တော်မူစာအား မိမိ ကဘရ်အတွင်း`၌နမားဇ်ဖတ်နေသည်ကိုတွေ့မြင် ခဲကြောင်းဟာဒီးစ်တော်မျာတွင် လာရှိပေသည်။(ဆွဟီမွတ်ဆလင်ကျမ်း၊အတွဲ-၂ ၊ စာ -၂၆၈)၊(မွတွနဒ်အဟ်မဒ်၊အတွဲ-၃ ၊စာ -၁၄၈)
အလ္လာမဟ်စိုင်ယဒ်မူဟမ္မဒ် အန္နဝါရ်ရှားဟ် ကရ်ှမီရီ သခင်၏အဆိုမှာ–
အေမာမ်ဒါရိုမီ ကဘရ် ၌အာဇာန်၊အေကာမတ်ရှိနေကြောင်း၊အေမာမ်တိရ်မေဇီ ကဘရ် ၌ ကွရ်အာန်တေလာဝတ်ရှိနေကြောင်းဖြင့်
ဟဇရတ်ရှားဝလီဝူလ္လာဟ် မိုဟဒစ်ဒေ့လ၀ီ သခင်၏အမိန့်ရှိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဤကဲ့သို့တွေ့မြင်ရ၏။ ကိုယ်တော်မြတ် သည်ထယ်ဝါခန့်ညားစွာဖြင့်လူဒာများဘက်သို့ အမြဲတစေကြည့်ရှုလျှက်ရှိနေတော်မူ၏သို့ရာတွင်စိတ်နှလုံးကျိုးငဲ့သူများ
မှကိုယ်တော်ဘက်သို့ ဇွဲရမက်အလိုရှိစွာနှင့်တစ်စုံတစ်ရာဆန္ဒပြုကြည့်ရှုလာပါက ကိုယ်တော်သည်ထိုသူ့ဘက်သို့ အလျင်အမြန်လှည့်တော်
မူ၏။(တစ်နည်းအားဖြင့်ထိုသူ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်စေတော်မူ၏) ။ထိုကြောင့်အကြင်သူပုိ့သသောစလာဝတ်၊စလာမ် သည်ကိုယ်တော်ထံရောက်
ရှိသွားသောအခါ ကိုယ်တော်၏ ရင်တော်သည် ကျယ်ဝန်းသွားတော်မူ၏။ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြီးစွာဖြင့် ပျော်ရွှင်
တော်မူသည်။ဤကားရှားဝလီဝူလ္လာသခင်က မိမိ၏ ကရ်ှဖ(မူရာကေဘာ၊တရားထိုင်ခြင်း၍မနောစိတ်ဖြင့်တွေ့မြင်ခြင်း)၌ တွေ့မြင်ရသည် ကိုရေးသားဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ (ရှားဝလီဝူလ္လာဟ် သခင်၏ဖွိုင်ဇွလ်ဟရမိုင်န်ကျမ်း”)
ဟဇရတ်ကကတာဒဟ်သခင် သည်အလွန်ကျော်ကြားလှသော တာဘေအင်တစ်ပါးဖြစ်သည်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှနဗီတမန်တော်
ဧကန်မုချမြေကြီးသည် အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကျူးလွန်ခြင်းမရှိသည့် အပြစ်ကင်းစင်သော ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် လွှမ်းမိုနိုင်ခြင်းမရှိဟူသော
အရာသည်သိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဟဇရတ်ကတာဒဟ်မှဆင့်ပြန်ခဲ့လေသည်။တဖ်စီရ်မဇွာဟရီ ၌ ဟဇရတ်ဂျာဗိရ်ရေဝါယတ်ဖြင့်
နဗီတမန်တော်မြတ်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်များအကောင်းပကတိအတိုင်းထိန်းသိမ်းခံထားရလျှက်ရှိခြင်း၏။နဗီ တမန်တော်များသည်
(ဂိုနား) အားလုံး ကင်းစင်သူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ခန္ဓာကိုယ်မျိုးသည် ဤကမ္ဘာလောကမှ ခွဲခွါသွားပြီးနောက်လည်း(တစ်နည်း) ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ ဝိညာဉ်ထွက်သွားသော်လည်း အာလောမ်ဘရ်ဇခ်တွင် ရှင်လျက်ရှိနေသည်။
ကျမ်းမြတ်ကွရ်အန်ကို မိမိနှလုံးသား`၌ ထိန်းသိမ်းထားသူ(ဟဖိဇ်များကွယ်လွန်သွားသောအခါအလ္လာအရှင်မြတ်က ပထဝီမြေကြီး
အားအမိန်ပေးသည်မှာ–အိုပထဝီမြေကြီးဤ ပုဂ္ဂိုလ်၏ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အား အသင်စားသုံးခြင်းမပြုလေနှင့် ဟုအမိန့်ရှိတော်မူလျှင်အဆိုပါ
မြေကြီးမှပြန်လည်လျှောက်တင်သည်မှာ အိုမွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်–ထိုသူ၏နှလုံးသားသည် ကိုယ်တော်အရှင်၏ ကျမ်းစာ ကလာမ်တော်ကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင်း ကွန်ုပ်ဘယ်မှာ ထိုသူအား စားသုံး၍ရနိုင်ပါအံ့နည်း ဟုလျှောက်တင်တော်မူလေသည်။
အိုဟုဒ်စစ်ပွဲ၌ ကျဆုံးခဲ့သော သာသနအာဇနည်များနှင့်ပါတ်သက်၍လည်းခိုင်လုံသောအကြောင်းရှိလာသည်မှာ——– အိုဟုဒ်စစ်ပွဲပြီးနှစ် (၄၀)ကျော်ကြာပြီးကာလ — ဟဇရတ် အာမီရေမာအ၀ီယာသခင်လက်ထက်တွင် ရှဟီးဒ်သခင်ကြီးမြှုပ်နှံရာအရပ်၌ ရေလွှမ်းမိုးရာ ဟဇရတ် အမ္မရူ ဘင် ဂျမီဟ် နှင့် ဟဇရတ်အဗ္ဗဒွလ်လာ ဘင်အမ္မရူ အန်ဆွာရီ သခင်တို့၏ခန္ဒာကိုယ်ကိုလတ်လတ်ဆတ်
ဆတ် အကောင်းပကတိအတိုင်း တွေ့ရှိရပြီးဟရတ်အာမိရ်ဟမ္မဇာသခင်၏ ခြေတော်ကို ပေါက်ပြားတူးရွင်း ထိသွားရာမှသွေးများယိုစီး
ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရှိပါသည်။(တဖ်စီရ်မဇွာဟိရကျမ်း၊မိုအတ်တွာအေ့ အိမာမ်မာလိက်
(ရှိခ်အဗ်ဒွေလ်ဟောက် မိုဟဒ္ဒစ်ဒေ့လ၀ီသခင်၏ မဒါရေဂျွန်နဗူဝပ် ၊ဒုတ်ယတွဲစာ ၅၇၈) မော်လနာ အာရှေက်အိလာဟိ ၏အဟ်ဝါလေ ဘရဇခ် – စာ-၄၈)
ထို့ကြောင်းနှစ်ဘဝ ခေါင်းဆောင်တမန်တော်မြတ်(စွ) ၏သန့်ပြန်စင်ကြယ်မင်္ဂလာရှိသော ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် ကဘရ်သင်းချိုင်း ဂူဗိမာန်တော် ရှင်လျှက်ရှိတော်ရှိမူကြောင်း သမိုင်းအခြေခံဖြစ်ရပ်များနှင့်လည်းအတည်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်သည် ဟစ်ဂျရီ (၅၇၀) ခန့်နူရွဒ်ဒိန်ဇန်ဂီ ဘုရင်လက်ထက်တွင်ဖြစ်သည်။ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်ပါတ်သက်၍ မဒီနာမြိုတော်မှ သမိုင်းဆရာအားလုံးအလ္လာဟ်မာမိုဂျတ်ဒဒီန် ဖီရိုဇ်အဘာဒီ နှင့်အခြားသမိုင်းပညာရှင်မိမိတို့၏သမိုင်းမှတ်အသီးသီးတွင် ပေထက် အက္ခရာတင်ခဲ့လေသည်။၎င်းနှင့်ပါတ်သက်၍အကြောင်းအရာအကျယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုရှိခွလ်ဟာဒီးစ် မော်လနာဇကရီးယာ(ရဟေ့)၏
အချုပိဆိုရလျှင် တမန်တော်မြတ်(စွ)သည် သတ္တလောက ဒွန္နိယသက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ ဝဖါတ်ကွယ်လွန်သွားပြီး
နောက်ရောင်ဝ်ဇွာဂူဗိမာန်တော်တွင် ဘရ်သက်တမ်းဖြင့် ရှင်လျှက်ရှိတော်မူသည်။ ထိုကဲ့သို့ရှင်ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ပ်တို့လူ
သားဦးဏှောက်ဖြင့်တွေးဆ၍မရနိုင်ကြောင်း အလ္လာအရှင်မြတ်က နုတ်ပိတ်ထားသည့်အတွက် ဝေဖန်ခြင့်မပြုအပ်ပေ။
ထို့ကြောင်းအလ္လာအအရှင်မြတ်က ဤသို့မိန့်တော်မူထားသည်။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် (ထိုအကြောင်းကို) တွေးဆဆင်ခြင် မသိမမြင်နိုင်ကြချေ။(၂း၁၅၄)
အထက်ပါအချက်အလက်နှင့်ပါတ်သက်၍ လက်လှမ်းမီရာ ဖတဝါ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်
အောက်ပါအချက်အလက်နှင့် link ကိုပူးတွဲတင်ပြပါသည်။
The Prophet Muhammad s.a.w. is ALIVE
Reference:1..ဖတွလ်ဘာရီ(ဘိုခါရီအကျယ်ပြန်)အတွဲ-၇ ၊စာ-၂၂ -အီဂျစ်ရိုက်
Reference:3..ဘိုခါရီအကျယ်ပြန် အွမ္မဒတွလ် ကာရီ အတွဲ-၇ ၊စာ- ၆၀၀
Reference:4..ဖွိုင်ဇလ်ဘာရီ-အတွ- ၁ ၊စာ-၁၈၃
Reference:5..စဟီမွတ်ဆလင်မ် ကျမ်း၊အတွဲ- ၂ ၊ စာ- ၂၆၈
Reference:6..မွတနဒ်အဟ်မဒ် အတွဲ – ၃ ၊စာ – ၁၄၈
Reference:7..အလ္လာမာစခါဝီ၏ အလ်ကောင်လွလ် ဘအီဒ် ၊စာ-၁၂၅
Reference:8..ဝဖွါအွလ်ဝဖါ အတွဲ – ၂ ၊စာ-၄၁၆ ။နိုင်လွလ်အောင်ဝ်တွာရ် အတွဲ -၃ ၊စာ-၂၆၄ ။အအလာအွတ်စိုနန်တွဲ ၁၀ ၊စာ-၃၃၀
Reference:9..မစ်ကတ်ကျမ်း၊ဒါရှိမီ ကျမ်းမှ မဇွာဟေရ်ဟောက် အတွဲ- ၇ ၊စာ-၁၈၅ ။
Reference:10..အလ္လာမာဟ်ရှဘိရ်အဟ်မဒ်အွတ်စ်မာနီ၏ဖွတဟွလ်မွဆလင်မ်၊ရှရဟ်မွတ်ဆလင် အတွဲ ၃ ၊ စာ-၄၁၉…
MMSY နှင့် MFG တို့တွင်တပြိုင်တည်းဖေါ်ပြပါသည်။အမှားအယွင်းတစ်စုံရာတွေ့ရှိပါက….
kotinmaung2010@gmail.com (သို့မဟုတ်) Comment ဖြင့်အကြောင်းကြားပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ပါသည်။